HIM | Health in Myanmar » 2012 » November
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, စီးပွားရေး, အခွင့်အရေး
ငါမင်းနဲ့ မနှစ်ကတွေ့တုန်းက အားရပါးရ နှုတ်ဆက်ချင်ခဲ့မိတယ် သူငယ်ချင်း။ မင်းလည်း အန်ဂျီအိုမှာ အလုပ်လုပ်နေတာသိတော့ ၀မ်းသာမိတယ်။ ငါတို့တွေ ကွဲသွားကြတာ ၁၀ နှစ်ကျော်နေပြီလေ။ ငယ်ငယ်တုန်း ကလို လက်သီးပြင်းပြင်းလေးနှစ်ချက် သုံးချက်လောက် မင်းကို စပြီး ထိုးပြစ်လိုက်ချင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းက လူအများလေးစားတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေပြီလေ။
The new PEPFAR blueprint has no mention of needles and syringes
PEPFAR’s new blueprint released today will not lead to an AIDS free generation. People who inject drugs are hardly mentioned in it. The words needle or syringe do not appear in the document. http://www.pepfar.gov/documents/organization/201386.pdf And testing is overemphasized asaprevention activity instead ofagateway to care. Testing is not prevention. Testing has not […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, ကလေး
မွန်တွင် ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့အကြို စာနာမှုစေတနာအဖွဲ့ ဖက်ရှင်မယ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
Care Myanmar (မော်လ မြိုင်)၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ World AIDS Day အကြို စာနာမှု စေတနာအဖွဲ့ (MSM) ၏ဖက်ရှင် မယ်ရွေးပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ည ၇ နာရီခွဲ တွင်မော် လမြိုင်မြို့၊ မြေနီကုန်းရပ်၊ ဆန်းရှိုင်း ဗီလာမြက်ခင်းပြင်၌ပြုလုပ်သည်။
Myanmar Positive Group Statement
Here is the text from the statement of the National PLHIV Network 2012 Forum. Where are the previous five? [him] moderator ++++++++++++++++++ 6th National PLHIV Network 2012 Forum Statement “Statement issued by Myanmar Positive Group (National PLHIV Network)” on the 6th National PLHIV Forum 2012 Date: 16 September 2012 Letter No.12/09/02 (MPG) Myanmar Positive Group […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, Eleven, HIV, UNAIDS
မြန်မာနိုင်ငံ HIVAIDS ရောဂါဆိုင်ရာ အမျိုးသား မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (၂၀၁၁-၂၀၁၅) နှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း (Operation Plan) ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ယင်းတွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ခန့်မှန်းခဲ့သော HIV ထပ်မံကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက်၏ ထက်ဝက်သို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌ လျော့ကျသွားရန် ရည်မှန်းထားသည်။
More HIV photos from Time magazine
Here is more AIDS p0rn. You can see all these poor suffering people on the Time magazine website softening up America after the US Commander-in-Chief’s visit. The text under the slide show is: “Followingahalf century of military rule, care for HIV/AIDS patients in Burma lags behind other countries. Half of the estimated 240,000 […]
တောင်အာရှ ကာယ ဗလမောင် ပြိုင်ပွဲတွင် HIV ရောဂါ ခံစား နေရသည့် မဏိပူရ ကာယ အလှမောင် အနိုင်ရ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, အမျိုးသား
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မဏိပူရ ပြည်နယ်မှ HIV ရောဂါ ခံစား နေရသော ကာယ အလှမောင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ခွန်ဒရာ ပန်ပရာဒစ် ကူးမာသည် ပန်ဂျက် ပြည်နယ် လက်ဟီအန်နာ မြို့တွင် ကျင်းပသော တောင်အာရှ ၆၅ ကီလို ဝိတ်တန်း ကာယဗလမောင် ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ကြောင်း အင်တာနက် သတင်း အရ သိရသည်။
A comment on the university student that changed history
Here isathoughtful and insightful anonymous response to the posting yesterday http://www.hivinfo4mm.org/university-of-sydney-reports-that-one-of-their-students-may-have-changed-history/. Any response from the University of Sydney? Readers are welcome to send these postings to the U of S. [him] moderator ++++++++++++++++++ It is no surprise thatanaive university from the developed world would like to claim thatasignificant change […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါး1 comment | Tags: AIDS, HIV, နည်းလမ်း
”ခုကာလက ဆေးကုသ စရိတ်တွေ သိပ်ကြီးတယ်။ ကိုဒေါနလည်း သိမှာပါ။ ဥပမာ- AIDS ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ သိချင်လို့ ဆေးစစ်ရင် မနည်းကုန်တယ်ဗျ”
”ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ အလုပ်ရဖို့အတွက် ဆေးစစ်ရတယ် ဆရာ၊ အလုပ်မရခင် ငွေက အတော်ကုန်နေပြီ ဆရာ”
”ဒါကို အဆင်ပြေအောင် ယူကေက သုတေသီတွေက ထီထွင်နေတယ်။ လူနာခန္ဓာ ကိုယ်ထဲမှာ ပိုးကောင်ရေ နည်းနေ ရင်တောင် စစ်လို့ရတဲ့ နည်းသစ် ပေါ့ဗျာ။ ဒီနည်းက ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာတယ်တဲ့”
ခုခံအား ကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသိပညာရှိမှု နည်းပါးနေသေး
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, MRTV-4, ကလေး
ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ အသိပညာရှိမှုတွေ နည်းပါး နေသေးတယ်လို့ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ ယူနီဆပ်တို့ ပူးပေါင်း ပြုလုပ် တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးသူငယ်များ အခြေအနေ သုံးသပ် အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်အရ သိရပါတယ်။ ဒီလို အသိပညာ နည်းပါးတဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းရှိ အသက် ၁၅ နှစ် အောက်တွေမှာ အဆိုပါ ရောဂါ ကူးစက်မှု နှုန်းတွေ များပြားနေသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
University of Sydney reports that one of their students may have changed history
This isafascinating article onauniversity website about an expatriate Burman who was given an opportunity to speak withadelegation of leaders from Myanmar because she was in the right place at the right time. Only it appears that some of what she told them was wrong! She is quoted: “More than […]